Lovia 4 hanomezana loko ny latabatrao | Bezzia
Kitapo latabatra 4 hanomezana loko ny latabatrao
Maria vazquez | 20/07/2021 12:00 | lakozia
Mandritra ny fahavaratra dia sahisahy be loko kokoa isika rehetra ao an-tranontsika. Miala any izahay kojakoja miloko mazava hamoronana tontolo iainana mahasambatra kokoa izay mifanaraka amin'ny tsapantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Eo amin'ny latabatra ihany koa, toerana anaovan'ny lovia maro loko ny sehatra afovoany.
Ao Bezzia dia mizara takelaka latabatra efatra androany azonao atao izahay omeo sento miloko ny latabatrao. Ary tsia, tsy mila mividy tabilao iray manontolo ianao hanaovana azy, ho ampy ny mampiditra sombin-javatra vitsivitsy mba hampiasan'ny latabatrao ny fomba fahavaratra.
Fantatsika fa ny takelaka feno latabatra dia maneho famatsiam-bola lehibe. Ho fanampin'izay, tsy ny trano rehetra no manana toerana hipetrahana lovia roa feno. Mamporisika anao izahay noho izany mividy sombin-javatra tsirairay, sombin-javatra tianao, manintona ny sainao ary afaka manambatra amin'ny latabatra isan'andro ianao.
1 Kitapo latabatra Zara Home
2 Fitaovana fisakafoanana valence
3 Fitaovana fisakafoanana Odalin
4 Kitapo latabatra Baita sy solomaso Geometrie
Kitapo latabatra Zara Home
Ireo latabatra fitaratra misy alokaloka mavo, maitso mavana ary mavokely avy amin'ny fanangonana Zara Home vaovao dia tsy voamariky. Ary raha manintona ny mason'izy ireo, andraso mandra-pahitanao azy miaraka! Rehefa atambatra eo ambony latabatra ireo sanganasa miloko samy hafa, toy ny ao amin'ny katalaoginy, dia miova ny latabatra.
Safidy izay raiki-pitia tamintsika izy nefa manana tsara nefa: ny lovia tsy mety amin'ny microwave na fanasana vilia. Tsy heverinay, noho io antony io, fa latabatra ahazoana aina isan'andro izy io, fa ny takelaka na ny solomaso misy tsindrin-tsakafo kosa dia mety ho safidy tsara hamita sakafo na hankafizana moka.
Fitaovana fisakafoanana valence
Raha tianao ny lokon'ny latabatra ao an-trano Zara Home, dia tsy ho hainao ny manohitra ny mena, ny maitso ary ny mavo an'ny takelaka Valance. Amidy ao amin'ny Maisons du Monde ity takelaka fanaovana vato sy tanimanga ity, tsy toy ny teo aloha mifanentana amin'ny microwave sy ny fanasana vilia.
Ny sakafo fisakafoanana dia misy lovia fisakafoanana, lovia lasopy, lovia tsindrin-tsakafo, kaopy, vilia baolina, ary koa ny lovia famafazana. Ny ankamaroan'ny faritra amidy amin'ny roa be, Ka tsy hanana olana ianao amin'ny famoronana ny fitiavanao raha tsy misy fampiasam-bola lehibe.
Fitaovana fisakafoanana Odalin
Odalin avy amin'i Kave Home no voalohany indrindra amin'ny takelaka firy izay asehonay anao anio. Vita amin'ny porselana, ny tsirairay amin'ireo sangan'asa izay mamorona an'ity latabatra ity dia manana endrika fotsy roa miaraka aminy sisiny mavo na manga mifanohitra. Eny, azonao atao ihany koa ny misafidy azy amin'ny feo manga malina kokoa.
Vita amin'ny porselana, mineraly voajanahary, ny singa tsirairay dia samy manana ny lokony sy ny endriny. Izy rehetra dia milina fanasana lovia, microwave sy lafaoro ary azonao ampiasaina izy ireo mba hitafianao ny latabatrao ao anaty sy ety ivelany, amin'ny terrasinao na zaridainanao.
Odalin dia fanangonana voaomana amin'ny sakafo isan-karazany. Voaharo takelaka fisaka, lovia tsindrin-tsakafo, lovia samy hafa habe ary na kafe iray aza, izay azonao vidiana misaraka, azonao atao ny mameno ny latabatrao amin'ny fomba manomboka amin'ny tsindrin-tsakafo ka hatramin'ny tsindrin-tsakafo.
Kitapo latabatra Baita sy solomaso Geometrie
Ny latabatra Baita miisa 18 avy ao amin'ny Villa D'Este Home Tivoli dia iray amin'ny ankafizinay indrindra noho ny lokony tsara sy vaovao. Vita amin'ny stoneware ary nolokoina tamin'ny tanana Izy io dia misy lovia fisakafoanana 6, lovia lasopy 6 ary lovia tsindrin-tsakafo 6 misy loko 6 samy hafa. Ny fiviliana amin'ny endriny sy ny lokony dia manasongadina ihany koa ny hakanton'ny tsirairay avy aminy, tsy ekenao ve izany?
Na dia tianay aza izany, ny lovia dia manana but roa. Ny voalohany dia ny tsy ahafahanao mividy ny sombin'izy ireo misaraka; amidy feno ao Westwing ny lovia. Ny faharoa dia izay tsy azo antoka ny fanasana vilia, izay mety tsy azo ampiharina amin'ny fampiasana isan'andro.
Mba hanonerana kosa, any Westwing dia azonao atao ny mahita an'io solomaso sy goba kely izay miaraka amin'ity tabilao ity amin'ny sary. Na ny solomaso na ny solomaso misy lamina miloko amin'ny loko sy endrika samy hafa dia mety raha manampy loko amin'ny latabatrao ary azo antoka ny fanasana vilia!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » lakozia » Kitapo latabatra 4 hanomezana loko ny latabatrao
Amazon Prime dia miloka amin'ilay nampihetsi-po tamin'ny 'fahavaratra feno herisetra'
Zucchini nofenoina ratatouille sy akoho